Mg Thant: စင်ကာပူမှာ သွားဆေးခန်း ပြမယ်ဆိုရင်
စင်ကာပူမှာ သွားဆေးခန်း ပြမယ်ဆိုရင်
အားလုံး သိကြတဲ့အတိုင်း မကျန်းမာလို့ ဆေးခန်းပြရတဲ့အထဲမှာ သွားဆေးခန်း မျက်စိဆေးခန်းတို့မှာ ဆေးဖိုးဝါးခ ဈေးအကြီးဆုံးထဲမှာ ပါသည်။ အထူးသဖြင့် စင်ကာပူမှာဆိုရင် သာပင် ဆိုးသေးတယ်။ ကျန်းမာရေး အာမခံ အင်မတန် အသုံးများသော ဒီနိုင်ငံတွင်ပင် အထူးသဖြင့် သွားနှင့် ပက်သက်သော ကျန်းမာရေး အာမခံ လူအတော်များမှာ မရှိကြပါ။ သွားကျန်းမာရေး အာမခံအတွက် ပေးရသော လစဉ် ပရီမီယံကြေးမှာ ဈေးကြီးလှသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဘယ်လောက်ပင် အခုလို ဈေးကြီးသော်ငြားလည်း ကျန်မာရေးဆိုသည်မှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း မဖြစ်တတ်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခု။ သည်မှာတော့ သွား မျက်စိ စသည်နှင့် ပက်သက်ပြီး တစ်ခုခုဖြစ် တစ်ခုခုပြရသည် ရှိသော် မြန်မာ အများစု လုပ်လေ့လုပ်ထ ရှိသော အထာတစ်ခုမှာ မြန်မာပြည်ပြန်တဲ့ အချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ ကုခဲ့ ပြုပြင်ခဲ့ကြချင်း ဖြစ်သည်။ ကုန်ကျသည့် ဈေးဖိုးဝါးခမှာ အင်မတန်မှ ကွာခြားလှသည် မဟုတ်ပါသလား။
အခုတစ်လော အိမ်က မဒီ သွားဆေးခန်းကို အခေါက်အခါခါ သွားနေရသည်။ သူမ သွားများ ငယ်စဉ်က ပြုပြင်ခဲ့ရာမှာ သေချာမှု မရှိခဲ့သောကြောင့် အခုချိန်မှာ ဒုက္ခပေးလာသောအခါ သွားဆရာဝန်နှင့် မပြမဖြစ် ပြရတော့သည်။ သူမ လက်ရှိ အလုပ် မလုပ်နေသောကြောင့် မြန်မာပြည် ပြန်က ပြန်လုပ်လို့ ရနေသော်လည်း ကျနော်မှ ဒီတစ်ခါ လုပ်တာကနေ နောင်ကို တတ်နိုင်သလောက် ထပ်ပြန်မဖြစ်ရအောင် အစစအရာရာ သေချာစေချင်သောကြောင့် ဒီမှာလုပ်ဖို့ ပြောလေသည်။
သို့နှင့် မဒီ သည် ဆေးဖိုးဝါးခ အတွင်းမှ သူမအတွက် ရှော့ပင်ဖိုး ကျန်စေရခြင်း အကြောင်းငှာ ဈေးသက်သာရာ သက်သာစေကြောင်း ဆေးခန်းအပေါင်းတို့ကို ရှာပုံတော်ဖွင့်တော်မူလေတော့သည်။ ဒီကြားထဲ သွားက နာလာတော့ အိမ်နား သွားဆေးခန်းကို ပြေးလိုက်ရသေးသည်။ ဆေးခန်းက ဓါတ်မှန်ရိုက်ရမည် သွားနှုတ်သင့်က နှုတ်ရမည် ဆိုလာကြောင့် သူမမှာ မျက်လုံးလေး ကလယ် ကလယ်နှင့် နာက နာသော်လည်း ဈေးကြီးသောကြောင့် ခေါင်းတခါခါ လုပ်နေသည်။
နောက်ဆုံး ကံကောင်းစေကြောင်း ဆုတောင်းကောင်းခဲ့တယ်လို့ ထင်ရခြင်း အကျိုးငှာ သူမသည် ဈေးလည်း သက်သာ ၀န်ဆောင်မှုလည်းကောင်း မြန်မာလိုပင် ပြောဆို ဆက်ဆံလို့ရသည့် မြန်မာ နပ်စ်မများရှိသော မြန်မာဆရာဝန်မ တစ်ယောက် ရှိသော သွားဆေးခန်း တစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိလိုက်လေသတည်း။ ဤမျှနှင့် မပြီးသေး နောက်ဆုံး ဆေးခန်းမှ မြန်မာဆိုလျှင် ထပ်၍ ဈေးပင် လျှော့ပေးသည်ဟု ဆိုလာသောအခါ အချိုပေါ် သကာလောင်း သကဲ့သို့ ဖြစ်ရလေတည်း။
အကျွန်ုပ်မှာ သူမကို သွားဆေးခန်းရောက်လျှင် ဆရာဝန်ကို ပါးစပ်ဖြဲပြကာ အထဲက ပြုပြင်စရာ ရှိသမျှ သွားများ တစ်ချောင်းမကျန် ပြုပြင်ခိုင်းစေရန် ကြိုတင် မှာကြားထားသည်။ ထိုသို့ပြောသည့်အတိုင်းပင် ဆရာဝန်မှ လုပ်ဆောင်လေသောကြောင့် ယခုအခါ သူမမှာ သွားဆေခန်းကို သွားနေရသည့် အခေါက်က လက်ချောင်း နှစ်ဖက်စာ ပြည့်လုနီးနေပြီ ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ထိုသို့ သွားနှုတ် သွားပြုပြင်နေစဉ်ကာလအတွင်း သူမမှာ လုပ်ပြီးပြီးချင်း တစ်ရက်လောက် အနည်းငယ် နာကျင်ရုံကာလွဲပြီး ကြားဖူးနေကျသလို ယောင်ခြင်း ကိုင်းခြင်း ဖျားနာခြင်း စသည် မည်သည့် ပြဿနာ ကြီးကြီးမျှ မကြုံခဲ့ရပေ။ ဆေးခန်းက ပေးသော ဆေးများ သောက်ခြင်းနှင့် ညွှန်ကြားချက်များ လိုက်နာဆောင်ရွက်တာလည်း ပါပါသည်။ သွားနှုတ်သည့်အခါတွင်လည်း အချိန်အကြာကြီး မယူ ခက်ခဲစွာ နှုတ်ရသည့် သွားပင်လျှင် တစ်နာရီပင် အချိန်မကြာကြောင်း အကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် အဖော်လိုက် သွားရင်း တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
ထိုသို့ ညွှန်းစရာ ကောင်းသော ဆေးခန်းမှာ မြန်မာများအတွက် သီးသန့် မြန်မာသွားဆေးခန်းတော့ မဟုတ်ပေ။ လူဖြူ၊ လူဝါ၊ လူညို လူမျိုးပေါင်းစုံ လာရောက် ပြသ ကုသကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ မြန်မာ ဆရာဝန်မ တစ်ယောက်တည်း ထိုင်သောဆေးခန်းလည်း မဟုတ်ပေ။ မိမိက မြန်မာဆိုလျှင် မြန်မာ ဆရာဝန်မနှင့် ပြလိုကြောင်း တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ပြောသည့်အတိုင်း လူစုံ လာရောက် ပြသသောကြောင့် ဆေးခန်းကို ရက်ချိန်းယူရန်မှာ သုံးပတ်ခန့်တောင် ကြိုတင်ရသည်အထိ ရှိတတ်သည်။ ရက်ချိန်းယူသောအခါ ပြောဆိုဆက်ဆံရ အဆင်ပြေစေရန် မြန်မာနပ်စ်မ များနှင့် ပြောလိုလျှင်လည်း ခေါ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုနိုင်သည်။ မြန်မာနပ်စ်မ အင်မတန် ၀န်ဆောင်မှု ကောင်းကြသည်။ ဤမျှလောက်ဆိုလျှင် ဆေးခန်းနှင့် ပက်သက်တာ အတော်များ သိလောက်ပြီ ဖြစ်သည်။
ထိုထိုသော ဆေးခန်း၏ အမည်နှင့် တည်နေရာမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ကြောင်း စင်ကာပူရမှ မြန်မာ သွားဆေးခန်းနှင့် ပက်သက်လျှင် ငွေကုန်သက်သာ စိတ်ချမ်းသာ အဆင်ပြေစေရန် အခမဲ့ ကြေငြာမောင်းခတ် ပေးလိုက်ရလေသတည်း
Tel 65-6372 0082
Fax : 65-6372 0072
Email : admin@idcsg.com
Web : http://idcsg.com/
Skype Address : idcsingapore
Emergency SMS only : 65-96870775
သက်ဝေ January 9, 2013 at 8:53 AM
Informative... Good post..!!
Noted with thanks ^.^
Ingjin Thant January 9, 2013 at 5:33 PM
Thanksalot for your info! :)